Sidaas, waxaad hadda u wareegay oo ka Sony to top ah qalab line Blackberry oo qarka u saaran yihiin in ay isticmaalaan qalab cusub BlackBerry. Maxay ku saabsan dhammaan xogta in aad qabto in aad jir Sony Android phone? Dhammaan dadka xiriirka la muhiim ah, sawiro, qoraalo, email, xog ku saabsan barnaamijyadooda kala duwan yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha aad jeclaan lahayd in uu wareejiyo ka badan si aad telefoon cusub BlackBerry ka hor iska leh qalab Sony jir sameeyo.
Waa hagaag, geeddi-socodka waa fudud ayaa sheegay in ka badan soo gabagabeeyay. Mid ka mid ah sababaha ugu wayn waxay tahay xaqiiqda ah in horumarinta BlackBerry ama qar in ay sax ah aan run ahaantii diiradda badan oo ku saabsan qayb ka mid ah in ay ku lug leedahay iibsiga Xogta laga helay qalab ka mid ah soo saarayaasha kale inay iyaga u gaar ah.
La'aanta taageero wanaagsan ka BlackBerry ka dhigan tahay in aad yeelan doonaan in ay ku xidhan software xisbiga 3aad si ay u gudbiyaan xogta, taas oo haddii ay taasi noqon lahayd ka Sony in Blackberry iyo in uu noqon karaa mid adag maadaama ay jiraan kaliya sacab muggiis oo software sida oo kaliya oo aad u yar iyaga ka mid ah ay qaban karaan shaqada iyada oo aan wax qalad ah iyo xogta waxyeello ama kharribo aad.
Ha weli ma argagixin sida aan halkaan u joognaa in aad hesho wareega deg deg ah oo ka kooban waxa aan u malaynayaa in ay yihiin fursadaha ugu fiican ee laga heli karo si aad u awoodaan in ay xogta ka hore Sony wareejiyo qalabka cusub Blackberry. Marka hore, waxaan isku dayi doonaa hab lacag la'aan ah; waxa aanu aad u hesho shaqo lagu sameeyey si kastaba ha ahaatee ka maqan heerka waxtarka aad jeclaan lahayd.
Jidka Free xogta ka Sony gudbaayo BlackBerry
Habka 1 - Isticmaalka Switch Device
Talaabada 1: Marka hore, dejisan iyo rakibi Switch app lagu magacaabo Device ku saabsan qalabka aad labada - Sony iyo Blackberry.
Talaabada 2: Burcad Switch app Device ku saabsan 2 qalabka, Sony iyo Blackberry.
Talaabada 3: Hubi in qalabka aad labada ku xiran yihiin shabakadda WiFi isku mid ah.
Talaabada 4: Marka app ka fureysaa labada hindiseen, raac su'aalo iyo tilmaamo fudud oo dhamaystiran.
Talaabada 6: Marka la dhammeeyo, aadan u tagi kartaa qalab cusub BlackBerry iyo dar aad xisaab email, bulshada xisaab warbaahinta iyo dejisan oo dhan barnaamijyadooda ka dukaanka BlackBerry Adduunka.
Habka 2 - Isticmaalka Jiid iyo dejinta
Waxa kale oo aad awoodo 'jiita iyo hoos' files u dhexeeya qalabka Sony Android iyo qalab cusub BlackBerry.
Talaabada 1: Isticmaalka USB ama ku amraya cable, xirmaan labada qalab BlackBerry iyo qalab Sony Android inay your computer.
Talaabada 2: Hadda abuurtaan Windows Explorer ag maraya si ay u bilaabaan> Accessories> Windows Explorer.
Talaabada 3: Hadda halkan, waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi files u dhexeeya labada qalabka.
Fiiro Gaar ah - Habkani shaqayn doonaa oo kaliya haddii aad leedahay PC ama Windows laptop. Haddii aad qabto Mac ah, raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Talaabada 1: Si aad u bilaabaan, lagu xiro qalabka BlackBerry aad si aad Mac.
Talaabada 2: Hadda, aad waa in si toos ah dhalisay in aan kala soo bixi BlackBerry Link. Hadii aysan taasi dhici dibna raac link si download link BlackBerry aad Mac.
Talaabada 3: Media iyo Removable_SDCARD: Marka aad ku rakiban BlackBerry Link, waa in aad arki karin 2 walxood oo cusub ku desktop noqon.
Talaabada 4: Hadda, haatan waa wakhtigii la isku xiro qalab Sony Android sidoo iyo jiididda iyo hoos u files galay kor ku xusan 2 fayl on desktop.
Habka ugu fiican ee wareejinta xogta - Wondershare MobileTrans
Tani waa tan habka ugu fiican ee xogta ka hore qalab mobile wareejiyo si aad casriga cusub. MobileTrans Ka Wondershare fudud ka dhigayaa mid aad u fudud oo dhan ay feature Transfer Phone 1 Click iyo sameeyaa in hab 100% halis xor ah oo nabad ah.
Waxaad isticmaali kartaa MobileTrans si ay u gudbiyaan xiriirada, abuse wac, fariimaha qoraalka ah, sawiro, jadwalka, video, music iyo barnaamijyadooda u dhexeeya qalab kala duwan inta ay yihiin socda Android, macruufka iyo Symbian. Waxaa xitaa taageertaa kala iibsiga ee xiriirada iyo fariimaha kaga imaanayo BlackBerry in Android iyo macruufka. Ma aha oo kaliya in, laakiin waxa kale oo aad u isticmaali kartaa in gurmad macluumaadka ku saabsan telefoonka, kaas oo wax yaabahan mid wax tar leh oo xirmo buuxda ka dhigaa.
Quick Poll: Waa kuwee BlackBerry qalab aad u isticmaali?
8. Blackberry qalooca 8520
10. Qalooca Blackberry 9320
> Resource > Android > Sida loo kala iibsiga xogta ka Sony in BlackBerry